Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: rehefa ady, mitovy hatrany ny filana fiomanana | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: rehefa ady, mitovy hatrany ny filana fiomanana
Ny tampoka, hono, tsy maha lehilahy, mainka izany eo amin’ny fiatrehana ady. Eo am-piadiana moa tsy ilaozan’ny fitrangan’ny sendrasendra sy ny tsy nampoizina raha tsy ampy ny fiomanana, ka mety ho resy mialoha ihany. Tsy ny adilahy ihany no voakasiky ny filana fiomanana fa rehefa ady rehetra na iza na inona no atao fahavalo amin’izany. Amin’ny ankapobeny, ny fiomanana amin’izany dia azo fintinina amin’ny filazana ny filana fahamalinana alohan’ny fampisehoana fahasahiana.
Efa heno talohan’ny fifandonan’ny samy tompon’andraikitra pôlitika teto an-toerana ny fampitandremana avy amin’ny ankilany nandefa hafatra ho an’ny andaniny, miseho amin’ny endrika fananarana, toy ny fampitandremana mba hitsapany ny tanjaky ny tenany sy handanjalanjany ny herin’ny ankilany alohan’ny hanandrankandrana hampiseho fahasahisahina diso toerana aminy, ahafahana hisintona volom-bava.
Alohan’ny fanapahan-kevitra momba ny fahavonona hiroso aman’ady dia mila mipetraka ny tanjona, dia ny fandresena. Voalanja, araka izany, ny hoenti-manana sy ny fitaovana eo am-pelatanana mifanandrify amin’ny filàna,vao dinihana ny tetika. Toy izany ny fitantanana raharaham-pirenena, adidy mavesatra mihoatra ny adim-piainana itoloman’ny tsirairay isan’andro. Tsy vitan’ny tsapatsapa toy ny fitsapatsapana vodin’akoho, ka rehefa tsy tay vao atody.
Na ady amin’ny fahantrana, na ady amin’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana,… ezaka tsy misy fitsaharana, hany vavolombelona ny fisehon’ny toe-draharaha taza-maso sy azo tsapain-tànana. Tsy mila fikarohana firy ny fahafahana milaza fa miainga avy amin’ny firaisamonina itoeran’ny baranahana ny tolona maro isan-karazany.
Ohatra, eo anivon’ny maro ny fikatson’ny fifamoivoizana eto andrenivohitra, avadika atsy avadika aroa toa tolona tsy omby tratra hatrany ny fikarohana fomba amahana ny olana. Tsy izany anefa no hilavoana lefona, tsy izany koa no hamelana hanao fitsapatsapana sy izao handrakandrana isan-karazany izao.
Iny izao, nanomboka ny hetsika fanasaziana ny fiara miantsona antsisin-dàlana mampitombo fahasahiranana ny mpandeha an-tongotra. Arahaba soa, tsy natao handefitra tokoa anie ny mpandeha tongotra amin’ny fahafahan’ny tsirairay hivezivezy arak’izay ilainy !
Indrisy anefa fa fiangarana no miseho. Raha misy fibahanan’ny fiara amin’ny tsy rariny dia iny làlana Andravohangy ambony iny no lohalaharana. Mbola latsaky ny roa taona lasa izay dia tsy azon’ny fiara nijanonana na ny ankavia na ny ankavanan-dàlana, kanefa ankehitriny, ny sisiny roa dia samy itaingenan’ny fiara. Tsy tamin’iny anefa no nanombohana ilay fihetsiketsehana nanirahana ny mpitandro filaminana ho an’ny fanarahan-dalàna eny an-dàlambe.